बाख्रीको पेटमा बोकाको अ’ङ्ग सुपर ग्लूले जोडेर खसीको मासु भन्दै बेच्दाबेच्दै भयो यस्तो! – PathivaraOnline
Home > अपराध > बाख्रीको पेटमा बोकाको अ’ङ्ग सुपर ग्लूले जोडेर खसीको मासु भन्दै बेच्दाबेच्दै भयो यस्तो!
admin October 18, 2020 October 18, 2020 अपराध, समाचार	0
परासी बजार । चाडवाडको मुखमा ठगीका अनेक स्वरुप देख्न पाइन्छ । अझ खाद्यान्न र मासु पसलमा त यस्ता ठगी झन धेरै हुने गरेको पाइएको छ । कोरोनालाई कारण देखाउँदै सामानको भाउ पनि आकाशिएको छ । त्यसमाथि अखाद्य र मिसावटले उपभोक्ता झन ठगिएका छन् । दशैंमा धेरै खपत हुने भनेको मासु पनि हो । तर बासी मासु बेच्ने, म’रे’का जनावरको मासु बेच्ने तथा स्त्री प्रजातिका जनावरको मासु बेचेर पनि उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यस समयमा एक खसी मासु पसलमा पुगेर मासु हेर्न थालेपछि बाख्रीको मासुमा सुपरग्लुले केहि भाग खसीको अ’ङ्ग टाँसेर खसीको रेटमा बाख्रीको मासु बेचिरहेको पाइएको थियो । बजार अनुगमन सक्रिय बनाइए उपभोक्ता ठग्ने यस्ता ब्यापारी हतोत्साहित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
चाडपर्वको बेलामा मासुको माग बढ्दा खसीको मासुमा बाख्रीको मासु मिसाएर बेच्ने घटना सार्वजनिक भएको बुधबारे हाटबजार अनुगमन गर्ने क्रममा समितिले मासुमा भैरहेको यस्तो पनि गलत कार्य भेटेको थियो जुन सबैलाई अचम्मलाग्दो बिषय थियो । बासी मासु बेच्ने, म’रे’का जनावरको मासु बेच्ने तथा स्त्री प्रजातिका जनावरको मासु बेचेर पनि उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ । अन्य समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
सन्तान नभएकै कारण यी महिलालाइ श्रीमानले गर्न लगाए यस्तो, ससुरा र देवरसँग!
१० हजार खर्च पाएपछि खुसी हुँदै मुगुकि बालिकाले लेखिन् शिक्षामन्त्रीलाई चिठी